မယ့်ကိုး: Was Leonardo da Vinci gay?
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 6/14/2009 06:25:00 PM
အော် ဆော်ရီးမမရေ ညီမ ပိန်းတာ ဟီဟိ
ဆားချက်တာမဟုတ်ပါဘူးးး မမ ရာ ဟဟဟ ကောင်းပါတယ် ညီမ အင်္ဂလိပ်စာ မဖတ်ဘူးမမရေ အမှန်အတိုင်းပြောမယ် အင်္ဂလိပ်စာမြင်ရင် ခေါင်းမူးလို့ မြန်မာလိုရေးထားတာပဲ ဖတ်သွားတယ် စိတ်မဆိုးနဲ့ မမရေ
မမပြောတာ ဟုတ်တယ် အားပေးစကားပြောပေးတဲ့ မမရေ ကျေးဇူးပါ ဘိုင်
14/6/09 7:01 PM
(ဗဟုသုတနဲ့ အတွေးတစ်ခုရသွားစေတဲ့ ပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူး..အထူး)
အပြုံးလှပတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လို့ မခံစားမိသေးတာ ခုထိ ...
ကျွန်တော်ပဲ ပိန်းလို့ဖြစ်မယ် :)
14/6/09 7:47 PM
မမကို ချစ်လွန်းလို့နော် အင်္ဂလိပ်စာတွေ ဖတ်သွားတယ် သိလား မသိတာတွေရော သိတာတွေရောနော်
ဒီနိုင်ငံမှာ လဲ homosexual တွေ ပေါတယ် မမရေ gay တွေ lesbian (စာလုံးပေါင်းမှန်လားမသိ) အများကြီးပဲ မမရာ ဘာလို့အဲလိုဖြစ်နေမှန်းမသိပါဘူး ဒါပေမယ့် မမရယ် လီယိုနာဒိုရဲ့ မိုနာလီဇာက တော့တော်တော်လေး ကမ္ဘာကျော်တယ်နော်
အိုင်လွယ်ပန်ပြောတာ ထောက်ခံတယ် မမရေ ညီမလဲ ပိန်းလို့လား မသိဘူး ခံစားလို့မရဘူး တမျိုးဖြစ်နိုင်တာလဲ ညီမတို့မှာ အဲလိုမျက်စိမရှိလို့လား မသိဘူးမမရေ
ညီမ က အဲဒါ လိုလီယိုနာဒိုကို gay လားလို့မေးတာ မေးခံရတာ မသိဘူး မမရေ မမပြောပြမှပဲ သိတာ ဟဟဟ မမပြောသလို လေ ညီမ ၃၅ ပြားလေ ဟဟဟ ခစ်ခစ် ဟိုးးးဟိုးးး
အခုလို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမရေ
14/6/09 8:09 PM
ငါ. အမ က ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေးတတ်ပ
ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးး တွေ၇င် သတိထားရမယ် :P
14/6/09 8:32 PM
မယ်ကိုးရေ လာဖတ်တယ် ၊၊ စုံစုံလင်လင် တင်ပြသွား ပုံလေး ကို သဘောကျတယ် ၊၊ ဗြိတိသျှ လိုရေးထားတာ တွေကိုတော့ ငှက်ကလေးလိုပဲ မနည်းဖတ် သွားရတယ်၊၊ ဟာဟ .....
14/6/09 10:48 PM
ထင်သာထင် တွေးသာတွေး မှန်တယ်။
Leonardo da Vinci ဟာ Gay ဖြစ်ကြောင်း သူ့ပန်းချီကားတွေ နဲ့ သက်သေပြထားတဲ့ သုသေတီစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိတယ်။ ကျနော်ဖတ်ဖူးတယ်။ အားမှပြန်ရှာပြီး သူငယ်ချင်းဆီ ပို့ပေးမယ် စိတ်ဝင်စားသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ နည်းနည်းထပ် လျှာရှည်လိုက်ဦးမယ်နော် .. ငှက်ကလေးနဲ့ အိုက်ပန် တွေးသလို လူတော်တော်များများ တွေးမိပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် အပြုံးဆိုလို့ ကမ္ဘာကျော် လိုက်ရတယ် ဆိုသလိုပေါ့. ။ တကယ်တမ်းက ဒီပန်းချီကားချပ် ကမ္ဘာကျော်ရတာဟာ မိုနာလီဇာ မျက်နှာပေါ်က အပြုံးကြောင့် မှန်ပေမယ့် ပြုံးပုံပြုံးနည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအပြုံးက သာမန်အပြုံးတစ်ပွင့်ပါဘဲ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ချယ်မှုန်းထားတဲ့ စုတ်ချက်တွေက သာမန်မဟုတ်ပါဘူး။ Sfumato နဲ့ Chiaroscuro ဆိုတဲ့ အလင်းအမှောင်အယူအဆတွေပါတဲ့ အရောင်ခြယ်မှုန်းတဲ့ နည်းစနစ် နှစ်ခုကြောင့်ပါ။ အကျယ်သိချင်ရင်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူ mona lisa, chiaroscuro, sfumato ဆိုပြီး google search မှာ ရှာကြည့်ပါ။
နောက်တစ်ခုက အဲသည်ခေတ် အဲသည်အခါက Leonardo da Vinci နာမည်ကျော်ခဲ့တာ The Last Supper ပန်ချီကားနဲ့ ထင်ရှားလူသိများခဲ့တာပါ။
davichi code ဆိုတဲ့ကားထွက်တော့အရမ်းကြည့်ချင်ခဲ့တယ်
15/6/09 12:35 AM
အို .. ခုမှ သံသယ ၀င်တာလား...။
ဒီလို ဖက်စုံ တော်တဲ့သူတွေက ဂေး ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်။
ဟိုမြန်မာပြည်က ခေတ်ဟောင်း မင်းသားကြီး ကြည့်ပါလား။ စွယ်စုံ (စွယ်စုံ)ရတယ်...။
ဗလကလဲ ခပ်တောင့်တောင့်၊ သီချင်းဆိုတယ်။ ရေးတယ်။ ဂီတ လိုက်စားတယ်။ သရုပ်ဆောင် လုပ်တယ်။ ဒါရိုက်တာ လုပ်တယ်။ ထုတ်လုပ်သူ လုပ်တယ်။ စာရေးတယ်။ မဂ္ဂဇင်း ထုတ်တယ်။ အို စုံလို့...။
ဒါပေမယ့် သူဒ့ါပုံ အရိုက်ခံရင် ကြည့်ပါလား.. မျက်လုံးကိုက ညုတုတုနဲ့... သူ့ဗလ မှ အားမနာ...။
ဟိဟိ...။ ခုတော့လဲ ဆုံးပါးသွားပါပြီ။
15/6/09 11:04 AM
သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားတဲ့ ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်ဖူးတယ်။ သူပဲလားတော့ မမှတ်တော့ဘူးဗျ။ အဲ့ဒီတစ်ယောက်လည်း ဂေးဆန်ဆန်ရေးထားတယ်။ အနုပညာကြောင့်များလားလို့ တွေးမိတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အိမ်ကျမှ ကြည့်တော့မယ်
15/6/09 2:07 PM
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတဲ့ ပန်းချီဆရာတွေကတော့ အများကြီးရယ်။နာမည်ကြီးထဲကဆို "for the good of all." ဆိုကာ သတ်သေသွားတဲ့ Vincent van Gogh ကို ပြောတာလား။သူကတော့ gay မဟုတ်ပါဘူး။
ကြုံတုန်းလေး ဖွရရင် ပန်းချီ ပန်းပုဆရာ Michelangelo က လည်း ဘာလိုလို ...
ကြယ်သောကြာရေ လာရှင်းပါဦး။ :)
15/6/09 6:36 PM
ကမ္ဘာ့ကျော်ပုဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း လေ့လာမှတ်သားခွင့်ရလိုက်တယ် အစ်မလည်း ဖတ်ဖူးတယ်ထင်တယ်
15/6/09 8:13 PM
သူဖန်တီးတဲ့ အနုပညာကို လေးစားတယ်...။
16/6/09 1:52 AM
ဟုတ်ပါတယ် ကိုဘွိုင်း ပြောသလိုပါပဲ။ အရမ်းကြီး ချွန်သွားတဲ့သူတွေမှာ အများနဲ့ မတူတဲ့ အစွန်းရောက်တတ်တဲ့ ခံစားမှုတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အတွေးအခေါ် အယူအဆ ခံစားသိမြင်မှုက သူများနဲ့ မတူလို့လည်း ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်နိုင်လောက်တဲ့ ဖန်ဆင်းမှု့တွေ ဖြစ်တည်လာရတာပါ။ လေးစားစရာတွေပါ။
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းမယ်ကိုး ထပ်ပြောတဲ့ Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ဆိုရင်လည်း တစ်ခေတ်မှာတစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ပန်းချီဆရာ ပန်းပုပညာရှင် ဖြစ်သလို ကဗျာဆရာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၃၃ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲနှင့် Tommaso dei Cavalieri ကို ပေးတဲ့ ပေးစာထဲမှာ သူဟာ ဘယ်လို လူစားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပြီးသားပါ။ Michelangelo's homoeroticism poetry ကိုလည်း သူ့ရဲ့တူမြေးတော်သူက ၁၆၂၃ ခုနှစ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖူးပါတယ်။
ဆိုရရင်တော့ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုလူတွေအဖြစ် ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူတို့အတွက် အရေးမကြီးခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့ အတွက်လည်း အရေးကြီးမယ် မထင်ပါဘူး။ စကားစပ်မိလို့ ရောက်တတ်ရာရာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု အနေနဲ့ ပြောခြင်းဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဟီး မယ်ကိုးရေ ဝင်ပြီးဖွပေးတာ ကျေနပ်မယ် ထင်ပါတယ်နော် ရေးတာလဲများသွားပြီ။
16/6/09 2:44 AM
ဒီစာလေးကို ဖတ်မိတဲ့ အရောင်တူချစ်သူများ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ရည်ရွယ်ရင်း တင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အတွေးစာလေးမှာ.ကူးယူဖော်ပြထားတဲ့ သိုးဆောင်းဝေါဟာရတွေကို အပင်ပန်းခံဖတ်ရှုပေးသော ဝေဖန်ပေးချက်ပေးသော ကြားကနေပါ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးသွားသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ ....
16/6/09 3:24 AM
အရင်ခေတ်က ထူးချွန်ကျော်ကြားတဲ့ ပန်းချီဆရာ စာရေးဆရာတွေထဲမှာ gay တွေ တော်တော်ပါတယ်၊ သူများနဲ့ မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကြောင့်လဲ အရင်က ဖိနှိပ်ခံရပြီး ခုမှသာ လူတွေက အသိအမှတ်ပြုကြတာာ ထင်တယ်၊ ခေတ်ရှေ့ပြေးတယ်ပဲ ပြောရမလားနော်
Ma Ma, I have read the whole page. It was suchapleasure to read this, and I really appreciate your dedication to me.
27/11/09 8:24 AM